प्रदेश प्रमूखमा किन अटाएन कर्णाली ?
सिञ्जा, १८ कात्तिक। बैराग लागेर आउँछ कहिलेकाहीँ राज्यको कर्णाली प्रतिकाे हेराइ देख्दा। परिवर्तनको लागि दश वर्षे जनयुद्धको बेला पनि केही परिवर्तन हुन्छ कि भनेर हाेमिएका कर्णालीबासी आज राज्य सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले गरेको निर्णय प्रति दुखित भएका छन् । कर्णालीकाे त बाँके जिल्लाले कर्णालीको सीमा चेपेको हो कि भन्ने महसुस गरेका छन् आज । कहिलेसम्म कर्णालीले न्याय पाउनै पर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गर्ने कर्णालीले ? भूगोलको विकट कर्णाली आज नेतृत्वको हिसाबले पनि बिकट बनाएको छर्लङ्ग देखिएको छ ।
अहिले सामाजकि सञ्जालमा प्रदेश प्रमूख सिफारिसमा कर्णालीलाई अन्याय गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । कर्णालीबाट कोही पनि नअटाएपछि विरोध भइरहेको हो । नेकपा प्रदेश सदस्य समेत रहेकी पूर्व राज्यमन्त्री गोमा कुँवरले सामाजिक सञ्जालमा घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘ हेप्नुको पनि हद हुन्छ ’ भन्दै नेकपा सविचालय बैठकको निर्णय कर्णाली मैत्री नभएको र कर्णाली नअटाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन् ।
यस्तै एल.पि. पौडेल नामका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष, कर्णाली भ्रमण, पर्यटक प्रदेश प्रमूख ’ भनेर व्यांग्य गरेका छन् । प्रायः सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले कर्णालीमा पर्यटक, आगन्तुक प्रदेश प्रमूख हुने भन्दै विरोध, व्यंग्य र टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
सात वटै प्रदेश जहाँको भए पनि कर्णालीबासी अटाउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको देखिन्छ । अन्य प्रदेशमा समेत प्रदेश बेगर जिल्लाका प्रदेश प्रमूख हुने देखिए पनि कम्तिमा कर्णालीको एक जना भए पनि अटाउनु पर्ने मत उनीहरुको रहेको छ ।
आईतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमूखलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । यसअघि कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल प्रदेश प्रमूख थिए । अहिले कर्णाली प्रदेशका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उक्त निर्णयको व्यापक विरोध गरिहेका छन् ।
साथीले बिदेशबाट फोन गर्यो, नेपालमा के छ ? मैले भने साथी कर्णाली उस्तै छ। गरिबी छ, बेरोजगारी छ, महंगी छ, भ्रष्टाचार छ, चेली बलात्कृत छे, न्यायको हाहाकार छ, अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा देश छोड्नेको भीड छ ।
अनि मेरो सरकार पानीजहाज ल्याउने तयारीमा ब्यस्त छ कर्णालीलाई हेपेको हेपेही छ दश वर्ष जनयुद्धमा राता बस्तिका मान्छे भन्ने अध्यक्ष पनि अहिले रन्तालिएर बाँकेतिर ढल्किँदैछन्। कुनै पनि निर्णय गर्दा कर्णालीका नेताहरुलाई हेपाई छ। कर्णालीका व्यक्तिसँग पैसा छैन, त्यो भएर कर्णाली हेपिएको छ, यस्तै छ। विदेशबाट फर्केर आउनुहोस्। अब दरबारियासँग होइन आफ्नो पार्टीका चिल्ला गाडी चढेर कर्णालीको नाममा बाेक्रा भाषण गर्नेसँग लडाईँ लड्नुपर्छ भन्ने बाहेक विकल्प केही देखिन। मेरो कर्णालीमा राज्यले यसरी सौतेनी व्यवहार गरेकाे किन ?